Ajoy Krishnamoorthy Maqaallo ku saabsan Martech Zone
Maqaallada by Ajoy Krishnamoorthy
Ajoy wuxuu leeyahay in kabadan 15 sano oo khibrad ah warshadaha dhanka farsamada, suuq geynta, iyo doorarka hogaaminta. Kahor Acumatica, Ajoy wuxuu ku sugnaa Microsoft wadida guusha ganacsiga guud ahaan noocyada kala duwan ee maareynta wax soo saarka iyo doorka suuq geynta ugu dambeysay wuxuu ahaa Agaasimihii Suuqgeynta Qeybta OEM halkaas oo isaga iyo kooxdiisu ay mas'uul ka ahaayeen istiraatiijiyadda u-socoshada suuqa ee guud ahaan dhageystayaasha ganacsiga iyo macaamiisha. .
Maxay Iibinta iyo Kooxaha Suuqgeyntu Ugu Baahan Yihiin Cloud ERP
Talaado, Oktoobar 6, 2020 Isniin, Oktoobar 5, 2020 Ajoy Krishnamoorthy
Hogaamiyaasha suuq geynta iyo iibinta waa qeybaha udub dhexaadka u ah wadista dakhliga shirkada. Waaxda suuqgeynta ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa kor u qaadida ganacsiga, faahfaahinaysa waxyaabaha ay bixiso, iyo sameynta waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. Suuqgeyntu sidoo kale waxay abuurtaa xiisaha sheyga waxayna abuurtaa horseedyo ama rajo. Riwaayad ahaan, kooxaha iibku waxay diiradda saaraan u beddelashada rajada macaamiisha bixinta. Hawlaha waxay si dhow isugu xiran yihiin oo muhiim u ah guud ahaan guusha ganacsiga. Marka la eego saameynta iibka iyo suuqgeyntu ku leeyihiin